Infographics: Ọ dị mma maka okporo ụzọ na SEO
Infographics anọwo na nwa oge mana ọ dịbeghị anya ọ ghọrọ oke iwe niile. Site na saịtị dịka Digg na-anwụ anwụ, ndị na-ere ahịa na-achọ ị nweta iju mmiri nke okporo ụzọ na saịtị ha na-etinye ihe osise na-enye nkọwa na-akọ akụkọ dị ukwuu. Maka ego ruru puku dollar, ịnwere ike ị nweta ụlọ ọrụ infographic iji mepụta ngosipụta dị elu nke na-ezi ozi na-egosi nsogbu. Inlọ ọrụ Infographic ga-eme nyocha ahụ na na imewe. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ Infographic nwere ndenye aha na-aga n'ihu.
Infographic na isiokwu si Ndị ahịa magnetism:
Enwere ụlọ ọrụ na-emepụta infographics ole na ole n'ebe ahụ, gụnyere DK New Media, nke na-enye ọrụ a. Trafficzọ nje ndị ezi ozi ọma na-ewe bụ naanị ọkara akụkọ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-agbasa ma na-ekwu maka infographic na blọọgụ ha na na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụ atụmatụ dị oke mkpa maka itinye backlinks na azụmaahịa gị.
Tags: magnetism ndị ahịainfographicuru nke infographicgịnị bụ infographic
Aug 22, 2012 na 6:49 PM
Ihe omuma ihe omuma na-eto eto kwa ubochi na mgbasa ozi. Agencylọ ọrụ na-ahụ maka ịre ahịa ịntanetị m họọrọ na-egosi m ọnụọgụgụ etu ihe ndị a si dị irè. Akwa post!